वास्तु नमिल्दा हामीले गर्ने हरेक कर्म आफै बिग्रन पुग्छ | माण्डवी एफएम
वास्तु नमिल्दा हामीले गर्ने हरेक कर्म आफै बिग्रन पुग्छ
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र १७, मंगलवार ०८:४०
नेपालमा घर, अफिस, कार्यालय, व्यवसायीक भवन, शिक्षण संस्था, अस्पताल आदिमा आम मानिसले लगानी लगाउदा कुनै न कुनै तरिकाबाट आप्mनो चिनेजानेका गुरु, पुरोहितको सल्लाह वा निर्देशनमा काम भइरहेको छ । प्राचीन वास्तु पद्धतिलाई आधार मानेर त्यसमा पनि नेपालमा तिव्वतीयन वास्तुको प्रभाव र मुगल वास्तुको प्रभाव रहेकाले कुन तरिका अपनाउने हो भन्ने नै थाहा नपाई वास्तु मिलाउन लाग्ने मानिसहरू धेरै छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा वास्तु शास्त्रको प्रयोग र यसको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर वास्तुविद् तथा दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघका सचिव सुरेश चन्द्र रिजालसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ।
आम मानिसले वास्तुशास्त्रलाई कसरी बुझ्ने ?
सामान्य भासामा भन्नु पर्दा भाग्य निर्माणको लागि केवल ज्योतिष र वास्तु बाट मात्र नभई कर्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । भाग्य र कर्मबाट प्रप्त सफलतालाई सहि स्थानम लगाउनका लागि वास्तुले सहयोग गर्दछ । तेसैले कुनै वेला सहिस्थानको पहिचान हुन सकेन भने हामीले कर्म र भाग्य वाट प्रप्त कुराहरु गलत स्थानमा पर्न जादा नोक्सान हुनेहुदा वास्तु शास्त्रले सहिस्थानको जानकारी गराउने काम गर्छ । तेसैले प्राचीन वास्तु पद्धतिलाई मिलाउने हो भने हामीले गर्ने हरेक कामहरु सोचेअनुसार नै अगाडि बड्दछ । हामीले गर्ने कर्मलाई बलियो बनाउन कि त ग्रहदशा बलियो हुनु पर्याे या वास्तु मिल्नु पर्याे यी दुईमध्ये कम्तिमा एउटा वलियो हुनुपर्याे । ग्रहदशा भनेको ब्रह्माण्डिय शक्ति हो जुन हाम्रो हातमा छैन तर जमिनको उर्जा मिलाउने काम वास्तु शास्त्रले गर्ने हुदा पछिल्लो समय यसको माग बढेको हो प्रकृतिसँग मानवको समन्वय र सहकार्य मिलाउने शास्त्र नै वास्तुशास्त्र हो ।
वास्तु शास्त्रको नियम पालना गरेर घर निर्माण गर्दा खर्च बढी हुन्छ भनिन्छ । यथार्थ के हो ?
मानिसको बुझाईमा फरक हो । वास्तुशास्त्रको नियम पालना गरेर कुनैपनि भवन निर्माण गर्दा लागत बढ्ने होईन वास्तु शास्त्रले त केवल घरको मोहोडा कता फर्काउने , पानीको ट्याङ्की र ईनार कुन दिशामा बनाउने, किचन कता फर्काउने, खाना खादा कुन दिशामा फर्केर वस्ने, ट्वाईलेट कुन दिशामा राख्ने, घरमुली कुन कोठामा सुत्ने, बच्चालाई पढ्न कहाँ राख्ने ट्वाईलेटको स्याप्टि ट्याङ्की कता मिलाउने, भरयाङ्ग कुन कोडमा बनाउने तेस्तैगरी पुजाकोठा कहाँ बनाउने भन्ने कुरामात्र वास्तु शास्त्रले जानकारी गराउने हो । दिशा मिलाउदा लागत बढ्न सक्ने अवस्था हुदैन त्यसकारण वास्तुशास्त्रको नियम पालना गर्दा लागत बढ्छभन्न भ्रममात्त्र हो ।
नेपालमा घर निर्माण गर्दा वास्तुशास्त्रलाई कत्तिको ध्यान दिने गरिएको छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा हाउजिङ, अपार्टमेण्ट, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाईएका घर, कोठा, कार्यालय ,व्यवसायीक भवन शिक्षण संस्था ,अस्पताल आादिमा वास्तु शास्त्र नमिलेको धेरै छ । वास्तुशास्त्रको प्रयोग गरी घर आदि निर्माण कार्य गर्दा त्यसमा बस्नेरउपभोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ । कुनै संस्थाले बनिसकेका भवनको थोरै भएपनि वास्तु मिलाउनुपर्छ भन्ने सोचले मिलाउँदै आउनु भएको पनि छ । नेपालमा वास्तु शास्त्रको विज्ञहरुको पनि कमिरहेकाले यसको पुर्ण पालना हुन नसकेको हो । वास्तु शास्त्रको नियम अल्टिच्युटका आधारमा फरकफरक हुने हुदा यसमा ध्यानदिनु पर्ने कुरा धेरैछ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले पनि हिमाल पहाड, तराईको बनावटमा रहेकाले पनि हरेक स्थानको वास्तु भौगोलिकका हिसाबले फरक फरक हुन्छ । त्येसैले कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा वास्तु शास्त्रीको सल्लाह अनुसार गर्नु भयो भने हामीले केही भएपनि वास्तुको नियम पालना गर्न छक्छै र राम्रो हुन्छ ।
वास्तुशास्त्रको नियन पालना नगर्ने हरुलाई यसको असर कहिले देखा पर्छ ?
मानिसको सधैंभरि एउटौ समय हुदैन कहिले राम्रो समय चल्छ त्यहीँ समयमा कहिलेकाही नराम्रो पनि भईरहेको हुन्छ । वास्तु मिलेको भवनमा वस्दा खेरि यदि हाम्रो दिनदशा खराव भएको अवस्थामा वास्तुको सहयोगमा हामीलाई जुन नोक्सान पुग्नुपर्ने हो त्यो पर्दैन । यदी वास्तु पनि मिलेको छैन दिनदशा पनि खराब चलिरहेको छ भने हामीले गर्न लागेका हरेक कर्महरु नोक्सान दायक हुन्छन् । त्येसैले हामीले हाम्रो कर्मलाई राम्रो बनाउनकालागि भाग्यको पनि सहयोग चाहिन्छ कर्मपनि गर्नुनै पर्छ र वस्ने स्थान यानिकी वास्तुपनि मिलाउनै पर्छ । तीनवटै कुराको मिल्यो भने मात्रै हामीले सोचेअनुसा काम गर्दा सफल भईन्छ ।
नेपालीहरूको वास्तुशास्त्रप्रति कस्तो धारणा पाउनुभएको छ ?
पछिल्लो समय मानिसहरूले विभिन्न निर्माण कार्यमा वास्तुशास्त्रलाई अनिवार्य जस्तै मान्दै आएका छन् । यसो हुनुको मूल कारण प्रचारप्रसार हो । प्रचारप्रसारका कारण नै मानिसहरूले वास्तुशास्त्रको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । विगत १०र१५ वर्षदेखि नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले वास्तुशास्त्रसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन् । त्यसैले, वास्तुशास्त्रप्रति जनचासो बढेको हो । साथै, वास्तुशास्त्रको प्रयोग गरी घर निर्माण गर्दा शुभफल प्राप्त हुने बिषयमा समेत मानिसहरु बिश्वस्त हुदै गएका छन् । आउदो दिनमा वास्तुशास्त्र प्रति मानिसहरुको बिश्वास अझ बढ्ने छ ।
नेपालमा वास्तुविद्हरूको उपलब्धता कस्तो छ ?
निर्माणको क्रमले तीव्रताको तुलनामा नेपालमा वास्तुविद्हरूको उपलब्धता भने न्यून छ । वास्तुशास्त्रको अध्ययनका लागि संस्कृतको अध्ययन जरुरी छ । वेद आफैमा कठिन शास्त्रअन्तर्गत पर्छ । वास्तुशास्त्र स्थापत्यवेदबाट विकसित भएको हो । त्यसैले, यसको अध्ययनका लागि मानिस दृढसङ्कल्पित हुनु आवश्यक छ । वास्तुशास्त्रसम्बन्धी अध्ययनअध्यापनका लागि पर्याप्त मात्रामा नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न सकेका पनि छैनन् । भएका शैक्षिक संस्थाले पनि सही मार्गदर्शनसहित अध्यापन गर्न सकेका छैनन् । यसले वास्तुशास्त्रको सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेका वास्तुविद्हरूको उपलब्धतामा कमी आएको हो ।
यति छोटो समयमा तपाईंको सफलता दक्षिण एसिया देखि विश्व ज्योतिष महासंघ सम्म कसरी भयो त ?
सानैदेखि देखि म केही गर्नु पर्छ भनेर सोच्ने गर्थें वाल्मीकिबाट पढाइ सकेपछि । सन् २०१६ मा पुल्चोकस्थित ःmव वास्तु कन्सल्टेन्सि वाट मैले वास्तु शास्त्रको प्रक्टिकल कोर्स पूरा गरेपछि त्यहाँ आचार्य लक्ष्मण पन्थी संग भेट भयो । उहाँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँको भेटपछि म दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघमा आबद्ध भए । केहिसमय सदस्यमा काम गरेपछि मेरो काम देखेर महासंघले सचिबको जिम्मा दिईयो र अहिले सचिबको काम गरिरहेको छु । भर्खरै मात्रै विश्व ज्योतिष महासंघको तीन नंवर प्रदेशको महासचिवमा सिफारिस भएर महासचिवको जिम्मेवारी निभाउदै पनि छु । मेरो भाग्य र मेहताले गर्दा होला सायद यहाँ सम्म पुगेको ।
आधुनिक सञ्चार प्रविधिले ओझेलमा पार्दै परम्परागत तीज
काबुलमा भएको आत्मघाती हमलामा २ नेपालीसहित १६ जनाको मृत्यु